बर्डफ्लु देखिएका बेला कुखुराको मासु खाने कि नखाने ?- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
माघ २०, २०७७ बुनु थारु
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा बर्डफ्लु देखिएपछि अहिले धेरै मानिसमा कुखुराको मासु खाने की नखाने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । माघ १७ गते पशु सेवा विभागले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका ७ साङ्लेखोला, फुटुङमा बर्डफ्लु देखिएको पुष्टि गरेको थियो।
चिकित्सकहरुका अनुसार बर्डफ्लु लागेको अवस्थामा मासु खान डराउनु पर्दैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कुखुरालगायत अन्य पशुपंक्षीको मासु राम्ररी पकाएर खाँदा सुरक्षित हुने बताउँछ । संगठनका अनुसार हालसम्म मासु खाएर यो भाइरस सरेको भन्ने प्रमाणहरु फेला परेका छैनन् ।
शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार यस्तो अवस्थामा मासु ढुक्क भएर खान सकिन्छ तर राम्ररी पकाएको हुनुपर्छ । डा. पुन भन्छन्,‘ ७० डिग्री सेल्सियस भन्दामाथि पाक्यो भने मासुमा भएको भाइरस नष्ट हुन्छन् यसबाट जोखिम हुँदैन । राम्ररी पाकेको मासु भित्र रातो देखिँदैन । मासु खाँदा उमालेको सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । पोलेको मासु खाँदा पनि राम्ररी भित्रैसम्म पकायो भने जोखिम गराउँदैन ।’ उनले हालको अवस्थामा भने हाफ बोइल्ड अण्डा भन्दा पनि राम्ररी उमालेको अण्डा खान सुझाए ।
डा. पुनले पशुपंक्षीको हेरचाह गर्ने किसान तथा ओसारपसार गर्ने मानिस, पंक्षीको बजारमा बेच्ने मानिस, खरिद गर्ने ,मासु काट्ने मानिसमा यो भाइरसको जोखिम रहने बताउँछन् । मुख्यतः यो भाइरसबाट बच्न सरसफाइ एकदमै जरुरी हुने उनको भनाइ छ ।
यो भाइरस पंक्षीबाट मानिसमा सर्ने भनेतापनि मानिस मानिसबाट सर्छ भन्ने देखिएको छैन तर सजग हुनुपर्ने हुन्छ । उनी बर्डफ्लु लागेमा रुघाखोकी तथा ज्वरोको लक्षणहरु देखिन सक्ने बताउँछन् । पशुपंक्षीको र्‍याल, सुली, प्वाखबाट यो रोग सर्न सक्ने हुन्छ ।
एक विज्ञप्तीमार्फत स्वास्थ्य सेवा विभागले पंक्षीहरुसँग काम गर्नु परेमा आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरु अपनाउन र बर्डफ्लु देखिएका क्षेत्र तथा स्थान वरपर रुघाखोकी लक्षण भएका व्यक्तिहरुसँग सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक सन् २००९ मा घरेलु पंक्षीमा बर्डफ्लु देखापरेको थियो । सन् २०१९ मा यस भाइरसको कारण पहिलो पटक २१ वर्षीय युवकको मृत्यु भएको थियो ।
प्रकाशित : माघ २०, २०७७ १२:५५
सिमसारमा कोरल्दैनन् पानी चरा
मानवीय र प्राकृतिक कारणले खुम्चिए पोखराका सिमसार
माघ २०, २०७७ दीपक परियार
पोखरा — बेंसीमा रहेको दिपाङ ताल छेवैमा भएको खेतमा झर्दा पोखरा कालिकाका गुरु त्रिपाठी बिरक्तिन्छन् । खेतजति जम्मै घडेरी बनेका छन् । उनी बच्चै हुँदा खेतका कान्लामा देखिने पानी चराका अण्डा अचेल भेटिँदैनन् । न त पहिलाजस्तो सिमसारमा आउने थरीथरीका आगन्तुक चराको बथान नै देखिन्छ ।
ताललाई घेर्ने गरी वरिपरि बाटो खनिएपछि बाटोबाहिरका सिमखेत पुरेर स्थानीयले धमाधम घडेरी बनाएका छन् । उनको खेत अझै चोखै छ । ‘रिङरोडभित्र पर्ने सिमसार घट्दो छ,’ उनले भने, ‘बाटो बाहिर पनि पानी चराको वासस्थान मासिएको छ ।’ दीपाङ तालछेउका खेतमा स्थानीयले बाहिरबाट माटो ल्याएर २ फिटसम्म पुरेका छन् । प्लटिङ गरेर घडेरी बनाएका छन् । रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराका ९ तालका सिमसार दिपाङमा जस्तै खुम्चिँदै छन् ।
पोखराका फेवा, वेगनाश, रूपा, दिपाङ, खास्टे, न्युरेनी, गुँदे, मैदी र कमलपोखरी ०७२ को माघमा विश्व सिमसार दिवस (फेब्रुअरी २) मा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका हुन् । यिनै तालमा रामसार सन्धिको मर्मविपरीत कार्य भइरहेका छन् । सिमसार तथा पक्षीको संरक्षित प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्र प्राकृतिक तथा मानवीय कारणले संकटमा छन् । सिमसार क्षेत्र साँघुरिँदा त्यसैमा आश्रित चरा घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस वर्ष पुसको अन्तिममा टाइगर माउन्टेन पोखरा लज र पोखरा पन्छी समाजले गरेको पानी चरा गणनाको तथ्यांकअनुसार यहाँका तालमा आगन्तुक र रैथाने गरी ४७ प्रजातिका २ हजार ३ सय ६४ पानी चरा भेटिएका छन् । जबकि यो संख्या पहिले ४ हजारसम्म थियो । बर्सेनि ग्रीष्म र हिउँदमा आउने आगन्तुक पानी चराको संख्या घटेको छ ।
३ वर्षयता सिलसिले हाँसले सिमसारमा अण्डा पारेर बच्चा कोरलेको भेटिएको छैन । पहिला १ हजार २ सयसम्मको संख्यामा देखिने यो रैथाने पानी चरा अहिले २ सय ५० मा घटेको पोखरा पक्षी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार बर्खामा गर्मी छल्न भारतीय उपमहाद्वीपको तल्लो भूभागबाट पोखरा आउने जलकुखुरा नभेटिएको ५ वर्ष भयो । सन् २०१२ सम्म हिउँदे आगन्तुक चराका रुपमा आएर यतैका रैथाने भएका कुर्मा पनि ५ सयबाट घटेर २ सय ५० मा पुगेका छन् । फेवा सिमसारमा बच्चा कोरल्ने आगन्तुक मरुल बगाले सिमकुखुरा आजकल निकै कम संख्यामा देखिन्छन् । रैथाने सिमकुखुराको संख्या पनि घटेको छ । हिउँदमा आउने स्वर्णनयन हाँस ६ वर्षपछि यसपालि बल्ल देखियो । ६–७ सयको संख्यामा आउने हिउँदे आगन्तुक कालीजुरे हाँस अहिले एक सयको संख्यामा पनि देखिँदैनन् । दुर्लभ कइलो टाउँके हाँस पहिला २०–२५ वटा देखिनेमा अहिले १–२ वटा भेटिन्छन् ।
फेवा सिमसारमा देखिने कर्‍याङकुरुङ, डुबुल्की चरा, लामाऔंलेलगायत पानी चरा निकै कम मात्रामा छन् । फेवाको मुहान हर्पन खोला, अँधेरी खोला, बेतिनी खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रानले ताल र सिमसार दुवैलाई असर पुर्‍याएको छ । यी खोलामा सिल्टेसन चेक डयाम बने पनि ठूला बाढी आउँदा ढुंगा–माटो बगेर आउने समस्या हटेको छैन ।
सिमसार मासेर माछापालन
पोखरा–२६ मा रहेको खास्टे तालमा २०७२ सम्म पानीको सतह न्यून थियो । जलीय वनस्पति, जलचरलगायत जैविक विविधताले भरिपूर्ण थियो । ताल कमलको फूल र सिमलकाँडेले ढाकिने गरेको स्थानीय चूडामणि लामिछानेलाई सम्झना छ । राष्ट्रिय ताल विकास बोर्ड गठन पछि ताल संरक्षणका नाममा सिमसार मास्ने काम सुरु भयो ।
०७१ मा खास्टे न्युरेनी ताल संरक्षण विकास समिति गठन भयो । त्यसपछि सिमसार खनेर निकालिएको र अन्तैबाट ल्याएको माटोले वरिपरि ढिस्को उठाएर पानी थुन्ने काम भयो । सिमसार पुरिएर पानीको सतहले भरियो । ०७३ माघमा खास्टे न्युरेनी ताल मत्स्य तथा कृषि उत्पादन सहकारी संस्था गठन भयो । सहकारीले तालमा व्यावसायिक माछापालन थाल्यो । मिचाहा माछाका रूपमा चिनिने टिलापियाले प्रवेश पायो । ब्रिगेट, ग्रास कार्प, कमन कार्प, रहु, नैनी लगायत माछा सहकारीले पाल्यो । सहकारीले यी माछालाई दाना दिँदैन, पानीमा पाइने घाँस, किरा, फटयांग्रा, लेउ, हिलो खाएर हुर्किन्छन् । माछापालनपछि जलीय वनस्पति मासिए । ताल संग्लिँदै गयो, सिमसार घट्दै गयो । त्यति मात्रै होइन, तालकै छेउमा संरक्षण समितिले वनभोज स्थल बनाएको छ । गहिराइ निकै कम भएको तालमा समेत पर्यटकका लागि डुंगा चलाउन थालिएको छ ।
सिमसार मास्न संरक्षणकै क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले अनुदान दिएका छन् । हरियो वन कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व वन्यजन्तु कोषले खास्टे तालको सौन्दर्यीकरणमा झन्डै ९० लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । तालमा भएको जालो (माटो, वनस्पति, लेउ सहितको भाग) फाल्न, ८ सय मिटर डयाम उठाउन, तालमा मिसिने खोलामा चेक डयाम बनाउन, पहिरो नियन्त्रण, वृक्षरोपण, सूचना केन्द्र, वनभोजस्थल, प्रतीक्षालय, माछा विक्री केन्द्र बनाउन कोषले उक्त रकम खर्चिएको हो । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले तालमा गत आर्थिक वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ खर्चियो । खास्टे न्युरेनी तालको विस्तार, संरक्षण र सौन्दर्यीकरण योजनामा भएको खर्चले समेत सिमसार मास्न भूमिका खेलेको छ । माटोको बाँध बनाउन, जाली भर्न, गेट निर्माण गर्न, ह्युम पाइप, मेसिनरी पर्खाल, फुट ट्रयाक निर्माण लगायतमा कार्यालयले सहयोग गरेको थियो ।
३ सय ८० रोपनीमा फैलिएको खास्टेको छेवैमा छ, न्युरेनी ताल । उक्त तालमा भने सहकारीले माछापालन गरेको छैन । संरक्षण समितिले जैविक विविधता संरक्षणका लागि न्युरेनी ताल छोडेको बताउँदै आएको छ । संरक्षण समिति एवं सहकारीका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारी खास्टेलाई माछापालन र पर्यटकीय गतिविधिका लागि र न्युरेनीलाई जैविक विविधता संरक्षणमा प्रयोग गर्ने बताउँछन् । खास्टे तालमा भएका जलीय वनस्पति, जलचरलाई भने जोगाउन नसकेको उनी स्विकार्छन् । ‘पहिला ताल कामै लाग्ने थिएन,’ सिमसार मास्नुको कारण बताउँदै उनले भने, ‘अहिले बल्ल ताल हो कि जस्तो देखिएको छ ।’ खास्टे र न्युरेनीको पानी ह्युम पाइपबाट वारपार गराइन्छ । माछा न्युरेनीपट्टि नजाओस् भनेर जाली लगाइएको छ । खास्टेमा छाडिएका भुरा न्युरेनीमा जान नदिने कार्य नियन्त्रण गर्न नसकिएको अधिकारीले बताए ।
पोखरा पक्षी समाजका अध्यक्षा मनशान्त घिमिरे ताल भन्नेबित्तिकै माछा पाल्नैपर्ने, डुंगा चलाउनैपर्ने, बाटो खनेर घेर्नैपर्ने मानसिकताका कारण सिमसार संकटमा परेको बताउँछन् । ‘सौन्दर्यीकरण गर्ने नाममा तालमा हुने वनस्पति अनावश्यक रूपमा झिकिन्छन्,’ उनले भने, ‘पहिले चरा देखिने ठाउँमा अहिले देखिँदैनन् ।’ मैदी तालबाहेक अन्य ८ तालका सिमसार संकुचित हुँदै गएको उनले बताए । सिमसार जोगाउन स्थानीय नै पहिले सचेत हुनुपर्ने उनी भन्छन् ।
पोखरा–२७ को दिपाङ तालमा पनि राष्ट्रिय ताल विकास बोर्डले डयाम बनायो । हरियो वन कार्यक्रमले झन्डै ४० लाख रुपैयाँ तालमा खर्चियो । तालको २ तिहाइ भाग ढाकेको जालो हटाएर १ तिहाइमा झारियो । २ तिहाइ भाग पानीले ढाकियो । जैविक विविधता मासियो । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले १० लाख रुपैयाँ तालको सौन्दर्यीकरणका नाममा खर्चियो । यहाँ पनि दिपाङ ताल संरक्षण समिति छ । दिपाङ ताल मत्स्य तथा कृषि उत्पादन सहकारी संस्थाले तालमा माछापालन गरेको छ । साताको एकपल्ट तालबाट माछा झिकेर स्थानीयलाई बेचिन्छ । संरक्षण समितिका सचिव एवं सहकारीका अध्यक्ष बोधराज लामिछाने तालको एक तिहाइ भाग अझै सिमसारकै रूपमा राखिएको दाबी गर्छन् । तालको बीचमा भएको थुम्को हटाउने योजना उनले सुनाए ।
सिमसारजति पानीले ढाकिएपछि यी तालमा चराचुरुंगी मुस्किलले देखा पर्छन् । दिपाङ ताल र खास्टेमा अण्डाबाट बच्चा कोरल्ने पानी चराको संख्या शून्य छ । खास्टेमा पाइने रैथाने हरि हाँसको संख्या घट्दो छ । रूपातालमा पनि माछापालन गर्दा रैथाने प्रजातिका जलजीव एवं जलीय वनस्पति खतरामा छन् ।
सौन्दर्यीकरणका नाममा सिमसार मास्दा जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमै असर परेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका सम्पर्क कार्यालय प्रमुख अमृत शर्मा बताउँछन् । तालमा माछापालन गर्दा अध्ययनपछि मात्रै जलचर, जलीय वनस्पतिलाई असर नगर्ने प्रजातिका माछा पाल्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘तालमा डुंगा चलाएरै, माछा पालेरै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता स्थानीयमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिमसारमा हुने चरा अवलोकन लगायत अन्य पर्यापर्यटनबाट पनि स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।’ सिमसारमा प्लटिङ गर्न, वरिपरि सडक खन्न रोक लगाउने, उपल्लो तटीय क्षेत्रको खेतबारीमा रासायनिक मल र कीटनाशक औषधि प्रयोगमा निषेध गर्ने लगायत कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कार्यान्वयन भएन एकीकृत योजना
साइटिस महासन्धि सचिवालयबाट आएको विज्ञको टोलीले पोखराका ९ ताललाई रामसारमा समेटेको मंगलबार ५ वर्ष पूरा भयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ वर्षअघि पोखरा उपत्यकाका तालको एकीकृत ताल जलाधार व्यवस्थापन योजना (सन् २०१८–२०२३) बनायो । योजनाको आधा अवधि बाँकी रहँदासम्म अझै लागू हुन सकेको छैन ।
जलाधार संरक्षण र पर्यापर्यटनमार्फत आयआर्जनका काम गरी तालवरपरका स्थानीयका जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उक्त योजनाको लक्ष्य थियो । पाँचवर्षे योजनाका लागि कुल १२ अर्ब २४ करोड ७५ लाख १६ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । योजनाअनुसार सबैभन्दा बढी लागत फेवातालमा लाग्ने देखिएको थियो । अनुमानित कुल बजेटमध्ये फेवातालका लागि ३१ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसपछि क्रमश: बेगनासमा २३, रुपामा १४, खास्टे/न्युरेनीमा ११, मैदीमा आठ, दिपाङमा सात, गुँदेमा चार र कमलपोखरीमा दुई प्रतिशत बजेट निर्धारण गरिएको छ । तालको संरचना, जैविक विविधताको संरक्षण, तालका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि र विकास, नियमन, तालसँग आश्रित उत्पीडित तथा विपन्न वर्गको उत्थानलगायतका विषयलाई योजनामा समेटिएको छ ।
रामसारमा सूचीकृत भएसँगै तालको विकासका योजना बन्ने, संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका साथै स्थानीय जनसहभागिता बढ्ने, पर्यापर्यटन प्रवर्धन हुने तथा यहाँ रहेका दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा जलचरको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइए पनि त्यसो हुन नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
रामसारमा सूचीकृत कास्कीका यी तालका पानीले ओगटेको क्षेत्र ९२४ हेक्टर छ भने तालको जलाधार क्षेत्र र तालसँग अन्तर सम्बन्धित सेती जलाधार क्षेत्रसमेत गरी यी तालको सञ्जालले ओगटेको कुल क्षेत्रफल दुई हजार ६१० हेक्टर छ ।
गण्डकी प्रदेशको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं वातावरणविद् अनुप गुरुङ सिमसार बचाउन प्रमुख रूपमा तालको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताउँछन् । साइबेरियन लगायत आगन्तुक चरा, जलचर र अन्य जैविक विविधताबीच सन्तुलन कायम गर्न सिमसार जोगाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले फेवाको अतिक्रमित जग्गामा खेतीपाती भइरहेको छ, जुन सिमसारका लागि हानिकारक हो,’ उनी भन्छन्, ‘पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । ताल पुरिनबाट रोक्नुपर्छ ।’
प्रकाशित : माघ २०, २०७७ १२:४६